कपडा धुँदै गर्दा वासिङ मेसिन भित्र आफ्नो बच्चालाई देखेपछि बाबुको उड्यो होस - Lokpath Lokpath
२०७६, २९ मंसिर आईतवार २०:००
कपडा धुँदै गर्दा वासिङ मेसिन भित्र आफ्नो बच्चालाई देखेपछि बाबुको उड्यो होस
प्रकाशित मिति : २०७६, २९ मंसिर आईतवार २०:००
एजेन्सी । हामी सबैलाई थाहा नै छ वासिङ मशिनमा कपडा धुने गरिन्छ । तर मेसिन भित्र आफ्नो बच्चालाई देख्दा कस्को मन नरोला ? यस्तै घटना एक पिताको साथमा घटेको छ ।
उनले कपडा धुँदै गर्दा मेसिनमा आफ्नो नजर लगाए । नजर मेसिनमा पर्ना साथ बच्चा मेसिन भित्र देखेपछि उनी बेहोस भए । उनलाई होस आएपछि मात्र थाहा भयो कि उनले बच्चाको कपडामा बच्चाको फेस प्रिन्ट गरेका थिए ।
सोसल मिडियामा यो फोटो अहिले निकै भाइरल भइरहेको छ । साथै फोटोमा कमेन्ट पनि अत्याधिक आइरहेको छ । सोशल मिडियामा यो फोटो उनै पिताले शेयर गरेका छन् जसको साथमा यो घटना घटेको थियो । उनले फोटो पोष्ट गर्दै क्याप्सनमा लेखेका छन्, तपाईँ यदि आफ्नो मन पर्ने कपडा धुँदै हुनुहुन्छ ।
बिशेष त आफ्नो बच्चाको फेस प्रिन्ट गरेको कपडा धुँदै हुनुहुन्छ भने त्यसमा एक चेतावनी अवस्य लेखिदिनु होला । फोलाई अरसियन एण्ड हिज बाइक आईडीबाट शेयर गरिएको छ ।
केहि सञ्चार माध्यामहरुले भने उक्त व्यक्तिकी पत्नी वासिङ मसिनमा कपडा धोइरहेको र उनले बच्चाको फोटो प्रिन्ट गरेर छपाएको टिसर्ट धुँदै गर्दा वासिङ मेसिनमा बच्चालाई देखेपछि बेहोस भएको खबर प्रकासित गरेका छन् ।
यो फोटो अहिले सामाजिक सञ्जालमा तीब्र गतिमा भाइरल भइरहेको छ । कमेन्टमा कसैले भने यस्तो घटना हामीलाई आयो भने हामी पनि बेहोस हुन्छौँ ।
अचानक चन्द्रमामा दखियो यस्तो अनौठो चिज, वैज्ञानिक हैरान ! (भिडियोसहित)
काठमाडौं । चन्द्रमामा मानिस पुग्ने कुरा अब पुरानो भईसकेको छ । तर के
जो ढुङ्गाबाटै रातारात करोडपति बने !
काठमाडौं । तान्जेनियका एक व्यक्ति रातारात करोडपति बनेका छन् । उनले खन्ने क्रममा
६० वर्षका श्रीमानले गरे अर्को विवाह, फेरी श्रीमतीलाई भने दोषी !
काठमाडौं । विवाह एउटा पवित्र बन्धन हो । विवाह धेरैले युवावस्थामै गर्छन् ।
समुन्द्र किनारमा भेटियो रहस्यमयी जीव, डाक्टर हैरान (फोटोसहित)
काठमाडौं । अहिले सोसल मिडियामा एक रहस्यमयी जीवको तस्वीर अत्याधिक भाइरल बनिरहेको छ
तपाइँलाई अत्याधिक थकान महसुस हुन्छ ? सावधान ! यी हुन…
सिरहामा कोरोना पोजेटिभ युवकको मृत्यु
बुबा मिर्गौला पीडित, छोराको करेन्ट लागेर मृत्यु
पहिचान संरक्षणमा लगानी गरिँदै